सदावहार हिमानी: उनका प्रेरणादायी १० भनाई – Naya Kura Daily
सदावहार हिमानी: उनका प्रेरणादायी १० भनाई
July 20, 2020 222
पुर्व पुवराज्ञी हिमानी शाहले धेरै उतारचढावहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहकी छोरी हिमानी अहिले समाजिक सेवामा सक्रिय छिन् । जनतासँग निकैनै सुमधुर र स्वच्छ छवि बनाएकि हिमानीले आफ्नो पतिका कारण थुप्रै सम’स्या भोग्नुपर्यो । राजपरिवारको बुहारी र भाविष्यकि रानीको रुपमा हेरिएकि हिमानी सधैँ जनताबिच लोकप्रिय बनिन् ।
समाजिक सेवामा लागेर नागरिकसँग नजिक बनेकि हिमानीका चाल, चलन र व्यवहार सधैँ जनताकालागि लोकप्रिय बने । युवराज्ञीको हैसियतमा होस् वा सामान्य नागरिक हुँदा, हिमानीका विवा’दास्पद समाचार कहिले आएन । पति पारश शाहको एकपिच्छे अर्को नका’रात्मक समाचारहरु आइरहदा पनि हिमानीमा कुनै चि’न्ताको भाव झल्किदैन । मनमा हजारौँ पि’डा भएपनि हिमानीले ती कुरा अगाडी ल्याइनन् । पतिको बच्पनाले कुन श्रीमतिको मन पो’ल्दैन र ? तर, हिमानीको मुस्कान टुटेको छैन ।
२) आत्मगान होईन राष्ट्रगान गर्न पाउ, राष्ट्रकै लागि बाच्न र बलि’दान दिन पाउ । ३) समाजमा भ्रान्ति छरेर निर्दोष लाई दो’षी बनाईन्छ निर्दोष वचनका छर्राहरु सहेर पनि आफ्नो विजय हुने दिन यहि कुराले मन बुझाएर प्रतिक्षा गरेका हुन्छन । “सत्य र सुर्य लुकाएर लुक्दैनन’
४) बदला लिएर होईन बदलिएर देखाउ ! ५) आफन्त तिनै हुन जसले प्रतिकुलतामा पनि कहिले साथ छोडदैनन् ६) राम्रो समयको प्रतिक्षा नगर्नुस बरु समयलाई राम्रो संग प्रयोग गर्नुहोस सफलता अवश्य मिल्नेछ । ७) राम्रो समयको प्रतिक्षा नगर्नुस बरु समयलाई राम्रो संग प्रयोग गर्नुहोस सफलता अवश्य मिल्नेछ ।
Prev‘गाउँपालिका अध्यक्षमाथि खुकुरी प्रहार गर्नेको घरबाट लागुऔषध बरामद’
Nextआज साउनको पहिलो सोमबार : व्रत बस्दा के खाने, के नखाने ? जान्नुहोस्
विराटनगरमा फेरि दुई साता लकडाउन